Dr Abbiyyii fi Ob Isaayyaas woliigaltee nagaa, diinagdee fi dippiloomaasii mallatteessan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dr Abbiyyii fi Ob Isaayyaas woliigaltee nagaa, diinagdee fi dippiloomaasii mallatteessan
Daawwannaa ministerri muummee Itoophiyaa, Dr Abiyyi Ahmad, Ertiratti godhe hordofee biyyoonni lamaan woldhabdee woggaa 20’f turetti xumura godhuu fi boqonnaa haarawa saquuf murteessuu isaanii ifa godhan.
Akka woliigaltee hoogganoota biyyoota lamaaniitti kana booda nageenni biyyoottan lamaan jiddutti ni sabata, wolitti gaarreffannana yeroo dheeradhaaf isaan jidduu ture xumura ni argata.
Dr Abiyyii fi Ob Isaayyaas marii geggeessaa turn yeroo xumranitti woliigaltee Itoophiyaa fi Ertiraa jiddutti nagaa fi tasgabbii argamsiisuuf, akkasums murtee daangaa Aljeersi hujii irra oolchuuf woliigalaniiru. Gama biraatiinis, hoogganoonni lamaan, Itoophiyaa fi Ertiraa daldala, diinagdee, geejjiba, aadaa fi dippiloomaasiin wolitti hidhuuf hojjachuudhaaf woliigaltee irra gayaniiru.
Sochii Dr Abiyyii fi imala inni gara Ertiraaatti godhe gareen ABUT (Woyyaaneen) hin jiaalanne. Woliigaltee amma mallataayes danquuf tattaafachuun isii kan hin oole. Kana hubachuu ta’uu hin oolu kan hoogganoota lamaan rakkoo gara funduratti isaan mudatuu malu kamuu woliin hojjachuudhaana irra ni aanna waan jedhuutti kan isaan geesse. Wanti ifa ta’u qabu rakkoon Woyyaaneef jecha Itoophiyaa fi Gaafni Afrikaa harkaa miila hidhamuu kan hin qabne ta’uu isaati.
Previous articleManni marii Itoophiyaa Labsii Yeroo Muddamaa kaase
Next articleMaaltu ta’aa jira?